बिबाहा गर्दै हुनुहुन्छ ?दाईजो देखी कति जन्ती लैजान पाउने यस्तो छ नियम ! « Himal Post | Online News Revolution
बिबाहा गर्दै हुनुहुन्छ ?दाईजो देखी कति जन्ती लैजान पाउने यस्तो छ नियम !
प्रकाशित मिति : २०७३, १४ चैत्र ०७:५९
नारायण काफ्लेकाठमाडौँं, चैत १४ गते ।
अब वैवाहिक समारोहमा बाजागाजामा संलग्न र सहयोगीसमेत गरी १५० भन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने व्यवस्था हुँदैछ । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले तोकेको ५१ जना जन्ती लैजान मिल्ने व्यवस्था संशोधन गर्दै संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले १५० जनासम्म जन्ती लैजान मिल्ने सीमा तोकेको छ ।